I3WM, IceWM, Ion, JWM iyo MatchBox: 5 WM oo kale oo loogu talagalay Linux | Laga soo bilaabo Linux
Maanta waxaan sii wadaynaa kuweena booska shanaad ku saabsan Maareeyayaasha Daaqadaha (Maareeyayaasha Windows - WM, Ingiriis ahaan), halkaas oo aan dib ugu eegi doonno waxyaabaha soo socda 5, liiskayaga 50 hore looga hadlay.
1.5 Xulka wararka oo dhan
“Maareeyaha daaqada oo kale ah, oo gebi ahaanba laga soo qoray xoq. Kuwa bartilmaameedkoodu yahay inay shaqeeyaan waa GNU / Linux iyo Nidaamyada Howlgalka BSD. Koodhadhkeennu waa Bilaash iyo Furan Software Source (FOSS) oo ku hoos jira liisanka BSD. Sidoo kale, i3 waxaa ugu horreyn loogu talagalay adeegsadayaasha horumarsan iyo kuwa horumariya. Horumarkeeduna wuxuu ku saleysan yahay waaya-aragnimadii la helay markii la rabay in la jabsado (la hagaajiyo) Maareeyaha Daaqadda WMII".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaaday qiyaastii wax ka yar hal bil.
Waxay siisaa koodh si fiican loo akhrin karo loona diiwaangeliyey oo u roon horumarintiisa iyo la-qabatinkeeda, dadka garanaya sida barnaamij loo sameeyo laakiin aan daruuri u ahayn inay yaqaanaan dhammaan qaybaha gudaha ee X11.
Isticmaal xcb halkii aad ka isticmaali lahayd Xlib. xcb wuxuu leeyahay API nadiifiye badan, kaas oo doorbida inuu dhakhso badanyahay kiisaska badankood.
Waxay si sax ah u fulisaa taageerada kormeerayaasha badan, taas oo ah, u xilsaarista goob kasta oo shaqo shaashad muuqaal ah. Sidoo kale taageero siiya kormeerayaasha wareega.
U adeegso geed ahaan qaab dhismeedka xogta. Tani waxay u oggolaaneysaa qaabab ka dabacsan oo ka duwan habka ku saleysan tiirarka ee ay adeegsadaan Maareeyayaasha kale ee dhaqameed.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "i3" o "I3-wm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
“Maamulaha daaqada ee Nidaamka Window Window Linux. Oo ujeeddadeedu ugu weyn tahay inay bixiso xawaare iyo fududaan adeegsi, iyada oo aan laga hor istaagin isticmaalaha".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday ilaa 2 maalmood.
Waxaa ku jira baarka hawsha leh khamaarista, furayaasha daaqadaha iyo daaqadaha, iyo nidaam menu firfircoon.
Kuu ogolaanayaa daaqadaha dalabka in lagu shaqeeyo kumbuyuutarka iyo jiirka. Windows-ka waxaa lagu aqoonsan karaa bar-tilmaameedka, saxaaradda, dusha desktop-ka ama way qarsoomi karaan. Waxaana lagu xakamayn karaa iyadoo la adeegsanayo daaqad dhaqaajis deg deg ah (Alt + Tab) iyo liiska daaqadaha.
Waxaa ku jira taageerada kormeerayaal fara badan oo loo maro RandR iyo Xinerama.
Waa mid si heer sare ah loo qaabeyn karo, mowduuc leh, oo si wanaagsan loo diiwaangeliyey. Waxaa ku jira maamule bannaanka oo ikhtiyaari ikhtiyaari ah u leh taageero hufnaan, maamule kalfadhi fudud, iyo saxan nidaam.
Waxaa loo heli karaa inta badan qaybinta Linux iyo BSD.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "icewm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
“Maamulaha daaqada oo kale ah ee Tiling-ka ah, oo waliba leh shaashado tabeysan oo loo yaqaan PWM oo hanan kara daaqado macmiil badan. Astaamahani waxay caawinayaan in daaqadaha la abaabulo oo ay si dhakhso leh isugu kala beddelaan. Waxaa loo qorsheeyay ugu horreyn sidii Maamulaha Daaqadda hufan oo caqli badan ee isticmaalayaasha doorbida kumbuyuutarka.".
Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaaday in kabadan 11 sano kahor.
Horumarintiisu waxay gaadhay nooca 3 (Ion3), oo bixiya hawlgalinta mudnaanta leh iyada oo loo marayo kumbuyuutarka, laakiin sidoo kale u oggolaanaya hawlgallada aasaasiga ah, sida beddelidda iyo jiidista daaqadaha iyo sidoo kale dib u habeynta muraayadaha, iyadoo la adeegsanayo jiirka.
Waxay bixisay daaqado qaabeysan, oo leh cinwaankooda cinwaannada wali laga arki karo waxyaabaha ka sarreeya, si daaqado badan ay ugu dhex jiri karaan dhisme, laakiin mid uun baa hadhay, oo tabkeedu si fiican u muujiyey.
Faylalkeeda qaabeynta waxaa lagu qoray koodhka barnaamijka lua, kaas oo u oggolaaday inuu lahaado qaabab aad u firfircoon. Sidoo kale, waxay lahayd qaab daaqad sabayn aad u aasaasi ah oo si ikhtiyaar ah loo dooran karo markii la abuurayo goobo cusub oo shaqo (desktop desktop).
Cilad yar oo ku jirta ion3 ayaa ah in aysan bixin awood u leh in la isticmaalo jiirka si loo furo liiska xididka si loo bilaabo barnaamijyada. Marka, waxay kuxirantahay kumbuyuutarka ama ugu yaraan nooc nooc oo launcher ah si loo bilaabo codsiyada.
Kuwa soo socda ayaa awood u leh soo dejinta iyo rakibidda isku xirka. Iyo macluumaad dheeri ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM waxaad booqan kartaa kuwa soo socda isku xirka.
“Maareeyaha daaqad fudud oo loogu talagalay Nidaamka Daaqadda ee X11. Waxay ku qoran tahay C oo kaliya waxay isticmaashaa Xlib uguyaraan. Cabirkeeda oo yar awgeed, waa Maamulaha Daaqadda wanaagsan ee kombiyuutarada gaboobay iyo nidaamyo aan awood badan lahayn, sida RaspBerry PI, in kasta oo ay si fiican u karti u leedahay ka shaqeynta nidaamyada casriga ah Had iyo jeerna waxaa lagu soo ururiyaa qaybinta yar yar ee Linux sida Puppy Linux iyo Damn Small Linux, waxaana loo heli karaa xirmo gooni ah oo qeybinta kale ah.".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaaday qiyaastii 2 bilood kahor. In kasta oo, nuqulkeedii ugu dambeeyay ee la sii daayay (2.3.7) ay ka badnayd 2 sano ka hor.
Waxay raadineysaa inay hesho iswaafajinta ugufiican heerarka ICCCM, MWM iyo EWMH.
Qaabeynta waxaa lagu sameeyaa hal feyl oo XML ah.
Waxay bixisaa taageero hooyo oo loogu talagalay albaabbada iyo badhannada la beddeli karo, iyo ku xirida qashinka nidaamka.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "jwm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka ama tan kale isku xirka.
"AMAGoob saldhig furan oo furan oo loogu talagalay Nidaamka Daaqadda X ee ku shaqeeya dhufaysyada aan desktop-ka ahayn sida gacanta, sanduuqyada sare, dukaamo elektaroonig ah, iyo wax kasta oo kale oo shaashadda bannaan, farsamooyinka wax soo gelinta, ama nidaamka kheyraadka kombiyuutarka ay xadidan yihiin.".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaadey in kabadan 8 sano kahor.
Waxay ka kooban tahay dhowr codsiyo la is-weydaarsan karo iyo ikhtiyaarro ikhtiyaari ah oo lagu waafajin karo barxad gaar ah oo aan desktop ahayn si loo hagaajiyo ka faa'iideysiga deegaan "xaddidan".
Ku habboon nidaamyada ay tahay inay adeegsadaan qaraarro fiidiyow oo hooseeya iyo shaashad taabashada PDAs.
Waa xalka Software-ka kaas oo qayb ka ah Mashruuca Yocto, kaas oo ah mashruuc furan oo iskaashi ah kaas oo ka caawiya horumariyeyaasha inay abuuraan nidaamyo Linux ku saleysan oo loogu talagalay alaabooyinka gundhigga ah, iyadoon loo eegin qaab dhismeedka qalabka dhismaha. Hadafku waa in la bixiyo qalab jilicsan oo jilicsan iyo meel bannaan oo ay soo saareyaasha wax soo saarka ee adduunka oo dhan ku wadaagi karaan tiknoolajiyada, xirmooyinka software-ka, qaabeynta, iyo hababka ugu fiican ee loo isticmaali karo in lagu abuuro sawirro Linux ah oo loogu talagalay aaladaha gundhigga ah.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo sanduuqa o "Matchbox-window-manager-manager"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka iyo tan isku xirka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan kuwan soo socda 5 «Gestores de Ventanas», kana madax bannaan wax kasta «Entorno de Escritorio»loo yaqaan I3WM, IceWM, Ion, JWM iyo MatchBox, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » I3WM, IceWM, Ion, JWM iyo MatchBox: 5 WM-yada Beddelka ah ee Linux
Waxaad u sheegtay in Jwm uu yahay: «Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaadey qiyaastii 5 sano.»
Si kastaba ha noqotee, boggeeda waxay ku sheegaysaa in nooca ugu dambeeya uu yahay 2.3.7 ee 20170721: http://joewing.net/projects/jwm/release-2.3.html
Iyo godkaaga dambiga ugu dambeeya waa laga bilaabo Luulyo 25 ugu dambeysay ... https://github.com/joewing/jwm/
Markaa wax aan firfircooneyn 😉
Ku jawaab Firfircoon
Salaan, Firfircoonayn. Xaqiiqdii balanqaadkii kuugu dambeeyay wuxuu ahaa uun bil ka hor feylka "menu.c" iyo "taskbar.c" ee galka. Iyo 2 bilood kahor, feylka «configure.c» ee asalka mashruuca. Waxaa macquul ah, inaad tixraac ahaan u qaadatid taariikhda la soo daayay ee ugu dambeysay ee nooca 2.3.1 ee la tilmaamay inay tahay 20150618, halka nooca 2.3.7 uu leeyahay taariikhda lagu calaamadeeyay 20170721. Waad ku mahadsan tahay macluumaadka, sidaas darteed waxaan ku ilaalineynaa macluumaadka aad u sax ah oo cusbooneysiin ah.
Iceweasle Mobile fargeeto ah Fenix ​​taas oo ka timaadda kuwa aan isku xirnayn
Kala-Bixiyaha 2.90 wuxuu la yimaadaa hagaajinta mashiinadeeda, kaararka Nvidia, is-dhexgalka isticmaalaha iyo waxyaabo kale oo badan